Obaama oo ku baaqay in la soo dhaweeyo Muslimiinta – Radio Muqdisho
Obaama oo ku baaqay in la soo dhaweeyo Muslimiinta
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa mar kale dib u soo cusbooneysiyay baaqiisii ahaa in muwaadiniinta Mareykanka ay soo dhaweeyaan si wanagsana ula macaamilan Jaaliyadda Muslimiinta ah ee la nool,ayna u muujiyaan dabacsanan iyo qalbi furnaan.
Sida ay faafisay Jariidada Washinton Post wuxuu Madaxweynuhu u ballan qaaday Muslimiinta ku nool Mareykanka iyo dadka kale ee shesheeyaha ah inan si gooni ah loo faquuqi doonin.
Bayaan ka soo baxay Aqlka cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Madaxweynaha Mareykanka iyo Afadiisa ay ugu hambaleyeeyeen Muslimiinta munaasabadii Ciida Al-adxa, wuxaana bayaankaa lagu cadeeyay inay jiraan Malaayhiin Muslimiin ah oo hoy iyo nololba haysanin oo ku kal firirsan dunida.
Bayaankaa ayaa sidoo kale lagu canbaarayay hadalada qalafsan ee Musharaxa Xisbiga Jamhuuriya Donald Trumpu uu Muslimiinta ku sifeynayo.
Bishii Agost ee la soo dhaafay ayaa waxa u maamulka Obama shaaciyay inay gaareen heshiis ah in ay qaabilayaan 10 kun Qaxootgi Suuriyaan ah, waxaana la filyaa inuu Madaxweynuhu ka uu qeyb galo shirka looga hadlayo mushkiladda Qaxootiga Adduunka oo Todobaadka soo socoda ka dhici doono magaalada New York.
Daawo Sawirrada: Hey’adda Somali Relief Network of North America oo hilib Udxiyo ah ka qeybisay Afgooye